विदा कटौती हुँदा कोइँचहरु आक्रोशित : कर्मचारी र राजनीतिकर्मी चुपचाप
« बुबाआमाको चिर स्मरणार्थ छोराछोरीहरुबाट अक्षयकोष
युकेमा सुनुवार महिला समाजले १०९औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनायो »
“कर्मचारीहरुको लागि हामीले मात्र आन्दोलन गर्नुपर्ने ? हाम्रा स्थायी सरकारमा बस्ने कोइँचहरुको बौद्धिक चिन्तन स्तर कति छ भनेर यहीँबाट थाहा हुन्छ । आजको यस शुभकामना आदनप्रदान तथा जलपान कार्यक्रममा खोइ कर्मचारीहरुको उपस्थिति ? ब्लामिच समाजका अध्यक्ष शिव सुनुवार आक्रोशित हुँदै अगाडि भन्नु भो, कि सुनुवार सेवा समाजले कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता ग¥यो चिनेको छैन कि कोइँच बन्न नसकेका सुनुवार कर्मचारीहरुलाई सुनुवार सेवा समाज चाहिएको छैन । हामी कोइँचहरुलाई पनि राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने सुनुवार सेवा समाज । त्यही आन्दोलनले स्थापित गरेको अवसर टेकेर जागिर खाने हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनीले सुनुवार सेवा समाजलाई वेवास्ता गर्नु अचम्मकै कुरो मान्नुपर्छ । म पनि जागिरे नै हुँ । ल काठमाडौं भन्दा बाहिर हुने साथीहरुले त सूचना थाहा पाउनु भएन वा आउन सक्नुभएन । काठमाडौंभित्र रहेका सुनुवार कर्मचारीले १ घण्टा समय मिलाएर अनुहार देखाउन किन गाह्रो भयो ? यो गम्भीर विषय हो । एक किसिमले भन्दा हामी बौद्धिक र सरकारी मान्छे ठानेका हाम्रा सरकारी कर्मचारी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले कोइँचको लागि राज्यले विदा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।”
सुनुवार सेवा समाजले आदिवासी जनजातिहरुको विदा कटौती गरेर हिन्दूहरुको चाडलाई मात्र देशभरि सार्वजानिक विदा दिएको विषयमा सुसेस भवन कोटेश्वरमा अन्तरक्रियात्मक शुभकामना आदनप्रदान तथा जलपान कार्यक्रम राखेको थियो ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि झनै असमावेशी भएको र नेपालको संविधान २०७२ को खिल्ली उडाएको हुँदा यसको विरुद्ध खबरदारी गर्दै कोइँचहरुको राष्ट्रिय विदा कटौती प्रति कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अन्तरक्रियामा उपस्थित सबै आगन्तुक अतिथिलाई सुसेस उपाध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले स्वागत गर्दै कार्यक्रम सोलोलो गर्नुभयो ।
“२०५६ सालदेखि भद्र आन्दोलनमा सक्रिय बनेर दुई वर्षको अथक प्रयासपछि २०५८ साल मंसिर पूर्णिमादेखि राज्यबाट राइ, लिम्बु, याक्खा, सुनुवारको चाडलाई मुलुकभरि सार्वजानिक विदा दिएपछि कोइँच पहिचानको द्रुततर विकास तथा प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय मान्यता पायो । सुनुवार कामी हुन भन्ने मान्यता विस्तारै न्यून हुँदै गयो । तर फेरि राज्यले १६ वर्ष पछाडि विदा कटौती गर्नु अति दुःखद पक्ष भएको हुँदा यसको घोर भर्तसना गर्छु ।” शाँदार पिदारका दिन मुलुकभरि सार्वजानिक विदा दिइनुपर्छ भनेर आन्दोलित किरात समन्वय समितिका सदस्य संगठन सुनुवार सेवा समाजको तत्कालीन अध्यक्ष लोकप्रिय सुनुवार आक्रोशित हुनुभयो ।
कोइँचको राष्ट्रिय चाडको घोषणा के कसरी भयो भन्ने जानकारी भएपछि सबै कोइँचजन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संस्थागत शुभकामना दिँदै राज्यको असन्तुलित र विभेदित व्यवहारप्रति कडा आलोचना गर्नुभयो । यसैक्रममा सुनुवार महिला समाजका तर्फबाट शुभकामना दिनेक्रममा महिला समाजका सचिव शोभा सुनुवारले भन्नुभयो, “बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको नेपालको संविधानको भावना विरुद्ध ओली सरकारले नितान्त बाहुनवादी चरित्र देखायो । धर्म निरपेक्ष मुलुकको खिल्ली उठायो । अहिले यो देशको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको आत्मसम्मानमाथि प्रहार ग¥यो । यसको लागि हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । सबै सुनुवार जुट्नुको विकल्प छैन । फेरि पनि म त जागिरे हुँ समय भ्याउँदिन । मेरो पार्टीको सरकार छ बोल्नुहुँदैन भनेर कोही बस्नुहुन्छ वा बस्यो भने पञ्चायत कालको पुनरावृत्ति मात्र हुने छ । बौद्धिक स्वातन्त्र वा वाक स्वातन्त्रको उपहास हुने छ । कोइँचको अपमान हुँदा सबै कोइँच एक जुट हुनु आवश्यक छ । शायद हाम्रा कर्मचारी र राजनीतिकर्मी मित्रहरुले बुझ्नु भएन होला । अब हामी ढिलो नगरौं । सुनुवार सेवा समाज, सुनुवार महिला समाज, सुनुवार विद्यार्थी समाज, सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी समाज, सुनुवार ब्लमिच समाजले अहिले नरम धारबाट यसको विरोध गरीरहेको छौं । पहिचानको सन्दर्भमा सबै कोइँच दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई साथसहयोग गर्न आव्हान गर्दै शाँदार पिदारको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
कोइँचको चाडको विदा कटौतीप्रति खेद प्रकट गर्दै पूर्व माननीय दालकुमरी सुनुवारले भन्नुभयो, “यो सरकारको अति नै लज्जस्पद कार्य हो । हिन्दू धर्म मान्नेहरुको चाडको विदा चाहिँ देशभरि दिने अनि हामी किरातको विदालाई चाहिँ जातिगत रुपमा खुम्चाएर कटौती गर्ने यो सरासर गल्ती काम हो । सरकार सचिनुपर्छ । कोइँचको विदा पुनः यथावत कायम हुनुपर्छ ।”
त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजका संस्थापक कोषाध्यक्ष तथा सल्लाहकार टिकाराम मुलिचले कोइँचको चरित्रप्रति व्यंग्या गर्दै क्षोभ प्रकट गर्नुभयो, “कोइँचले विदा पाउँछौं भन्ने आसै गरेको थिएन । ढाँट्नुहुँदैन । मंसीरमा शाँदार गरेको पनि थिएन । फोल गर्थे । त्यो ख्योम्पातिचको थियो । अहिले कटौती भयो । कसैको टाउको दुःखेकै छैन । किन कोइँच सडकमा उत्रिन्थे ? कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत । तर त्यसो भनीरहँदा पहिचान पहिचान भनेर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिनेहरु एक दुई जनाको लागि विदा कटौती असह्य पिडा भएको छ । यसमा समेत अरुलाई भने दुःखेको छैन । र, मलाई खासै त्यस्तो आकाश नै खसे जस्तो लागेको छैन । म भने त्यस्तो भाग्यमानी सुनुवार कर्मचारी परेँ सुनुवारको लागि भनेर छुटाएको विदामा दुईतिन वर्ष बस्न पाएँ । अबकाले अभागीले त्यो पनि नपाउने भए । यसैले विदा सरकारले दिए अति उत्तम हो तर दुःख चिँ छैन । किनभने कुनै पनि सुनुवारलाई विदा कटौती हुँदा दुःख लाग्दैन भने मलाई मात्र दुःख लाग्नु स्वभाविक भएन ।”
टिकाराम मुलिचाकै कुरामा सदर गर्दै संस्थापक सचिव गुञ्जबहादुर सुनुवारले भन्नुभयो, “पहिचानको कुरा गर्दा यो भाषणभूषण भन्दा नि गीतसंगीत फिलिमले छिटो पहिचान दिँदो रहेछ । हामीले शाँदार पिदारको पिदा पाएपछि हाम्रो पहिचान देशविदेश फैलिएर गएको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । तर हाम्रा कोइँच दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा पहिचानको लागि सचेतना भने पुगेको पाइँदैन । शाँदार पिदारको यो अवसरमा सबैलाई पहिचानको चेत जागोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सरकारले कोइँँचको विदा कटौती गरेकोमा दुःख छ । यसको लागि सबै कोइँच राजनीतिकर्मी र सरकारी जागिरेहरुले पनि चासो दिनुपर्छ । पहिचान कुनै पनि एक्लो सुनुवारको होइन यो भनेको सबै सुनुवार समुदायको हो । यसैले यो सामुहिक कुरामा सबैले समय दिन सक्नुपर्छ र योगदान दिन सक्नुपर्छ । सरकारको असमावेशी क्रियाकलापप्रति घोर भर्तसना गर्दछु ।”
शुभकामना आदनप्रदानको क्रममा संस्थागतरुपमा सुनुवार सेवा समाज काठमाडौं, ललितपुर, कोइँच कुम्सो खिँ अध्यक्ष तिलक सुनुवार र सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी समाजका वृहस्मान सुनुवारले पनि खेद व्यक्त गर्दै कलाकारिता मार्फत शाँदार पिदार विदा कटौती वारे विरोध गर्ने र कोइँचहरुलाई जनजागरण गराउने बताउनुभयो । समाजका महासचिव समीर मुखिया सुनुवारले सुनुवार सेवा समाजले शाँदार पिदारको विदा कटौती वारे अहिलेसम्म गरेका प्रयास तथा कार्यवारे उपस्थित सबै अतिथिहरुलाई जानकारी गराउनुभयो । सचिव उत्तमकुमार सुनुवारले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममो अन्तमा कार्यक्रमको विट मार्दै संस्थाको अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले शुभकामनासहित साधुवाद प्रकट गर्नुभयो, “कोही बोल्छन् मात्र गर्दैनन् कोही गर्छन् बोल्दैनन् । हामी कोइँचहरुमा आजकाल खोइ कसको सिको गर्नुभयो ? बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिको हवी भएको छ । यसैले सुनुवार सेवा समाजले के ग¥यो भन्ने होइन सुनुवार सेवा समाजको लागि म के गर्न सक्छु भनेर कम्मर कस्नु प¥यो । अहिले सुनुवार सेवा समाजले यो गरेन उ गरेन, यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नु पर्ने भनेर फेसबुके खोकाइ खोकेको देखिन्छ । तर बोलाउँदा साथीहरु १ दिन पनि उपस्थित भएको देखिँदैन । तर सुविधा भने ती खोक्नेहरुलाई नै चाहिन्छ । सुनुवार सेवा समाजको सदस्य बन्नुहोस् भन्दा समेत के म सुनुवार होइन? किन बन्नु प¥यो ? सुनुवार सेवा समाजको सदस्य नबनेको भरमा ल कसले मलाई सुनुवार होइन भन्दोरहेछ ? भन्नुहुन्छ । यो यस्तो कुरा आउनु घमण्ड जाग्नु, बक्नु भनेको हामी सुनुवारको चेतनास्तर कति रहेछ भन्ने अनुमानको कसी हो । वास्तवमा भन्नुपर्दा सुनुवारमा संगठन नै शक्ति हो भन्ने ज्ञान अझै पनि जागृत भएको देखिँदैन । तर यसलाई पनि हामीले नराम्रो रुपमा लिएका छैनौं । यदि कोइँचहरुमा संगठन शक्तिको चेत भएको भए हाम्रो विदा कटौती हुँदै हुन्थेन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीलाई सन्तुलनमा राख्ने र खबरदारी गर्ने भनेको हामी जस्तै हाम्रो जस्तै संघसंस्थाहरु नै हो । विश्व इतिहास र राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि सामाजिक संस्थाहरुले पनि सरकारलाई धारासायी बनाएका छन् । यदि सरकारले नराम्रो काम ग¥यो भने सरकार ढाल्ने काम सामाजिक संस्थाहरुले पनि गर्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा सामाजिक संस्था पनि सरकारको आयु हो । सामाजिक संस्था पनि शक्ति हो । यसैले आम कोइँच दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले सुनुवार सेवा समाजलाई निरीह रुपमा आँकलन नगरी शक्तिको रुपमा स्वीकार्न अनुरोध गर्छु । अहिले हाम्रो विदा सरकारले गरेको छ । यसको विरुद्ध भोली सडकमा उत्रिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि तयार हुनु पनि अनुरोध गर्दछु । हामी हाम्रो अधिकारको लागि एकजुट हुनुपर्छ । शाँदार देयिले सबै कोइँचहरुलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि आँट दिओस्, जोस जाँगर भरोस्, सधै. सधैं प्रगति उन्नति होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै आम नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । आइदिनु भो, कुरा सुनी दिनु भो, आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनु भो । सबै सबैलाई मुरिमुरि धन्यवाद ।”